तपाईलाई कति कित्ता पर्यो त ? हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँड भयो नि ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उर्जा > तपाईलाई कति कित्ता पर्यो त ? हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँड भयो नि !
काठमाडौ । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको आइपीओ बिहीबार बाँडफाँड भएको छ । हाइड्रोपावरमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३३७ कित्तासम्म सेयर हात पारेका छन् । ३३० कित्तासम्म आवेदन दिनेलाई गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडिएको हो । मोदीको सेयर एनआइबीएल क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालय लैनचौरमा बिहान ९ बजे बाँडफाँड गरिएको हो ।
३४० कित्ताभन्दा माथि आवेदन दिने सबैले सेयर पाएका छन् । यो सेयरमा न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम १५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यो सेयरमा ९७ हजार १५५ जनाले आवेदन दिएकोमा ६५ हजार ५०८ जनाले सेयर पाएका छन् । जसमा ६५ हजार ४५४ जना सर्वसाधारण, ७ वटा सामूहिक लगानि कोष, ४७ जना कर्मचारीले सेयर पाएका छन् ।
यो सेयरमा साना लगानीकर्ताको हातमा २.८ प्रतिशत र ठूला लगानीकर्ताले २.२४ प्रतिशत सेयर पाएका छन् ।
युनाइटेड मोदीको गत फागुन १९ देखि २३ गतेसम्म १७ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ बिक्री खुला गरिएको थियो । १०० अंकित रुपैयाँ मूल्यको यो आइपीओमा कम्पनीले ३४ हजार ५०० कित्ता सेयर कर्मचारीको लागि छुट्याएको थियो भने ८६ हजार २५० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोष कम्पनीहरुलाई दिएको छ । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबीएल क्यापिटले गरेको हो ।
२०७३ चैत्र ३१ गते १०:२८ मा प्रकाशित
थाहा पाउनुभाछ ? दुई कम्पनिको कतिमा भयो सेयर मूल्य समायोजन !
कर्जा पाउनुभएन? बैशाख ३ देखि सस्तो ब्याजदरमा बैंकको कर्जा यसरी पाईन्छ !
जंगलमा बसेरै धौलागिरी आइसफलको बाटो कोरिँदै !
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै एसबिआईले कमायो करिब साढे ३५ करोड नाफा !
प्राइम बैंक र कन्काई विकास बैकबीचको स्वाप रेसियो ७१.५ कायम हुने
बाढी पहिरो पीडितका लागि ७५ करोड, उद्धारका लागि १०० डायल गर्नुस् !